Wzọ 5 iji mee ka ndị ahịa gị chee na ha hụrụ gị n'anya. Martech Zone
Ọrụ kachasị mma nke ndị ahịa chọrọ ọtụtụ ihe karịa ịmụmụ ọnụ ọchị, ọ bụ ezie na nke ahụ bụ ezigbo mmalite. Ndị ahịa nwere obi ụtọ na-eduga ịmeghachi azụmahịa, mmụba dị mma (nke na-eme ka SEO dịkwuo elu), yana mmụba mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere mmetụta ziri ezi (nke na-ebu ụzọ mee ka visibiliti na-achọ ihe ọ bụla), ọ nweghị ụlọ ọrụ nwere ike ịdị na-enweghị ndị ahịa ha Lee ụzọ ise dị mfe iji hụ na ndị ahịa gị hụrụ na ha hụrụ gị n’anya.
1. Jụọ ajụjụ ndị ziri ezi
Companylọ ọrụ ọ bụla kwesịrị ịjụ ajụjụ a kwa ụbọchị: Gịnị ka a ga-eme iji mee ka ihe dịrị ndị ahịa mfe? Ọ nwere ike ịbụ nkwado ntanetị na-adị n'ịntanetị, na-ahụ mgbe niile na ndị ahịa nwere ike ịbịakwute onye dị ndụ ngwa ngwa, ma ọ bụ tinye obere oge karịa iji emeghachi omume. Mgbe ihe dị mfe, ndị ahịa na-enwe obi ụtọ na nke ahụ kwesịrị ịbụ ebumnuche bụ isi nke azụmahịa ọ bụla.
2. Njikwa mmadụ
Otu esi emeso ndị ahịa na-amalite site na omume na-ekpo ọkụ, nnabata na ịmụmụ ọnụ ọchị. Mụmụ ọnụ ọchị mgbe gị na onye ahịa na-ekwurịta okwu na ekwentị bụ otu ụzọ isi mee ka olu gị daa ụda na-enwe obi ụtọ, na-ekpo ọkụ, ma bụrụ enyi. Ọ bụ ihe ijuanya na ọ na-arụ ọrụ, mana ọ na - eme ya (nwaa ya!). Na tụgharịa n'akụkụ, ahịa nwere ike n'otu ntabi ịgwa ma ọ bụrụ na onye ọrụ adịghị achọ ịnọ n'ebe ma ọ bụ na-enwe a ụbọchị ọjọọ. Nke a setịpụrụ ụda maka azụmahịa niile ma nwee ike ịchụpụ ndị ahịa ngwa ngwa. Nyochaa mmekọrịta, nwee ọzụzụ oge niile ma tinye ndị ziri ezi n'ọnọdụ ndị ahịa ndị ahịa.
3. Soro Na
A ga-enwe nsogbu n'agbanyeghị otu ụlọ ọrụ sirila rụọ ọrụ. Ijikwa ya ngwa ngwa na ọkachamara bụ nzọụkwụ otu, mana ịgbaso dị oke mkpa. Ndị ahịa kwesịrị ịma ka nlekọta ụlọ ọrụ gị na-echebara ma ọ bụghị na-agbanye ihe n'okpuru ihe mkpuchi ozugbo achọtara azịza.
4. Gbalịa Otu Ndị Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa
Otu ndị na-elekwasị anya na-ahapụ ndị nwe ụlọ ahịa ka ha nyochaa otu ndị ahịa nwere ike ịchọpụta ihe ha chọrọ, ọrụ ha tụrụ anya ya, ọ nwere ike ịmepụta ebu maka ọrụ ọrụ ka mma. Ma nọrọ na njikere ma nwee uche ghere oghe; ọ nwere ike ịbụ ihe ijuanya ma ọ bụ na-enye nsogbu ịnụ nzaghachi sitere n'aka otu ndị ahịa ma ọ bụ ndị ahịa nwere ike. Ọ ga-ewe akpụkpọ anụ oge ụfọdụ iji gabiga usoro a.
5. Mee ka ndi oru
N'ime ụwa zuru oke, ndị ọrụ niile ga-eweta ọrụ ọhụụ kachasị elu n'ihi na ha na-eche maka azụmaahịa na ndị ahịa ahụ n'ezie. N'ụzọ dị mwute, ọ bụghị mgbe niile ka ikpe ahụ dị. Tinye ihe mkpali, dị ka ihe nrite maka onye ọrụ nwere ọkwa kachasị mma maka ndị ahịa, ma mee ka ihe nrite maka ịlụ ọgụ-dịka ọkara ụbọchị na Fraịde maka otu ọnwa na-enweghị akwụ ụgwọ. A ụgwọ ọrụ usoro na-arụ ọrụ.
N'ime usoro a dum, gbaa mbọ hụ na a na-enyocha ndị ọrụ n'ụzọ dị mma. Ha kwesiri imata na a na-enyocha ha, ma ọ ga-abụ akụkụ nke nyocha kwa afọ. Nkwado nchịkọta dị, na ọ na-adịkarị mfe ile anya na mmekọrịta kọmputa niile ma ọ bụrụ na ịchọrọ nyochaa iyi nkwukọrịta n'etiti ndị ọrụ gị na ndị ahịa; nke ahụ na-abụkarị nnukwu ebe ị ga-amalite iji chọpụta nsogbu ndị nwere ike ime ma dozie ha.
Tags: CRMNdị ọrụ nlekọta ndị ahịa
Sep 4, 2013 na 12: 18 AM
Ekwenyere m, ndị ọrụ anyị ma ọ bụ ndị ọrụ anyị kwesịrị ịbụ akụkụ dị mkpa nke mgbasa ozi ahịa anyị. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji kwadebe ha ọzụzụ ọzụzụ ndị ahịa kwesịrị ekwesị na ịsọ mpi maka nka ahịa ha. Ndị ahịa anyị ga-amatakwu ịhụnanya ma ọ bụrụ na ndị ọ bụla na azụmahịa anyị ga-egosi ha nke ahụ.